မကျြစိအထူးကုဆရာဝနျကွီးမြားကိုယျတိုငျ ရေးသားပွုစုထားသော မကျြစိကနျြးမာရေးဆောငျးပါးမြားကို သိရှိနားလညျခွငျး အားဖွငျ့ ပွညျသူလူထုအကွား နစေ့ဉျဘဝတှငျ မကျြစိရောဂါမြား အခြိနျမရှေးပျေါပေါကျနိုငျကွောငျး သတိထားမိစရေနျ ဖွဈပါသညျ။ မိမိ၏မကျြစိအား ပိုမိုဂရုစိုကျရနျနှငျ့ ခှဲစိတျပွီးဆောငျရနျ/ရှောငျရနျမြားကို လိုကျနာဆောငျရှကျစခေငျြပါသညျ။
နှဈပေါငျးမြားစှာ အတှအေ့ကွုံရငျ့ပွီး သုတသေနပွုလုပျထားသော မကျြစိဆရာဝနျမြားကိုယျတိုငျ ရေးသားထားသော မကျြစိ ကနျြးမာရေးဆောငျးပါးမြားကွောငျ့ လူနာမြားအကွားဗဟုသုတ ပိုမိုတိုးတကျလာ မညျဟု ယုံကွညျပါသညျ။ မကျြစိ၏အရေးပါ ပုံနှငျ့ မကျြစိကနျြးမာရေးအား ဂရုစိုကျရနျလိုအပျ ကွောငျးပိုမိုသိရှိ နားလညျစရေနျ ရညျရှယျပါသညျ။
VIEW | 987
ဆီးချိုရောဂါကြောင့် အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်းသည် အများဆုံးတွေ့ရသောဆီးချိုမျက်စိရောဂါအမျိုး အစားဖြစ်ပြီး၊
VIEW | 563
သက်ကြီးမျက်စိမှုန်ရောဂါ [Age-related macular degeneration (AMD) ဆိုသည်မှာမက်ကူလာ ခေါ်မျက်စိမြင်လွှာ၏အာရုံခံမှုအကောင်းဆုံးနေရာ ယိုယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်ပြားခြင်းဖြစ်သည်၊ မက်ကူလာ (macula) ဆိုသည်မှာမြင်လွှာထဲကသေးငယ်သည့်ဧရိယာ၊မျက်စိ၏အတွင်းနံရံတွင်တန်းစီလျက်ရှိနေသော အလင်းအထိခိုက်မခံသည့်တစ်ရှူးဖြစ်သည်၊ မက်ကူလာသည်သင်၏အလယ်ဗဟိုမြင်ကွင်းအတွက်တာဝန် ရှိသော၊ သင့်အားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းစွာမြင်စေသောမြင်လွှာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
မြင်လွှာစုတ်ပြဲခြင်း သို့မဟုတ် မြင်လွှာကွာခြင်း ဆိုသည်မှာဘာလဲ။ မြင်လွှာသည် ကျွန်ုပ်တို့မျက်စိ၏နောက်တွင်ရှိသောအလင်းအထိခိုက်မခံသည့်တစ်သျူးအလွှာဖြစ် သည်၊ အလင်းရောင်ခြည်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်ကြည်လွှာ၊မျက်စိသူငယ်အိမ်နှင့်မှန်ဘီလူးမှတဆင့်မြင်လွှာ ပေါ်သို့အာရုံစူးစိုက်သည်၊ မြင်လွှာက ကျွန်ုပ်တို့
VIEW | 1,347
ရေတိမ်ရောဂါသည်သင်မျက်စိ၏အမြင်အာရုံကြောကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစေသည့်ရောဂါဖြစ်သည်၊ ပုံမှန် အားဖြင့်သင်၏မျက်စိ၏ ရှေ့ပိုင်းတွင်အရည်တည်ဆောက်သည့်အခါတွေ့ကြုံတတ်သည်၊ အဆိုပါအပိုရည် သည်သင်၏မျက်စိအားဖိအားတိုးပွားမှုသက်ရောက်စေပြီး၊ အမြင်အာရုံကြောကိုထိခိုက်ပျက်စီး (မျက်စိကွယ်) စေနိုင်သည်။
မျက်သားတက်ရောဂါ Pinguecula နှင့် Pterygium သို့မဟုတ် (Surfer's Eye ) ဆိုတာဘာလဲ? What IsaPinguecula andaPterygium (Surfer's Eye)?
VIEW | 1,547
မျက်သားတက်ရောဂါကို မျက်လုံး၏ အဖြူရောင်အပိုင်းတက်လျှင် (Pterygium) နှင့် ဘေးအစွန်မှ မျက်စိအလည်ဗဟိုသို့ဦးတည်ပြီး၊ အနက်ရောင်အဝိုင်းဆီရောက်လျှင်(Pinguecula) ဟုခေါ်သည်၊ မျက်သား တက်ရောဂါသည် မျက်ကြည်လွှာ (မျက်စိ၏ကြည်လင်သောရှေ့အလွှာ) နှင့် မျက်မြှေးလွှာ(conjunctiva) မှ တက်လာပြီး၊ မျက်စိအဖြူလွှာပေါ်ဖုံးနေသောနေရာသို့အမြှေးပါးများတက်လာခြင်းဖြစ်သည်၊ နှစ်မျိုးစလုံးကြီး ထွားမှု သည်အတော်အတန်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
မျက်စိတိမ်စွဲရောဂါ ဆိုတာဘာလဲ ?
VIEW | 1,593
ပုံမှန်မျက်လုံး၏ကြည့်နေသောမှန်ဘီလူးတွင်တိမ်များကာနေသကဲ့သို့ဝေေ၀၀ါးဝါးဖြစ်လာခြင်းကိုမျက်စိ တိမ်စွဲရောဂါဖြစ်သည်ဟုခေါ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုခုကိုကြည့်လိုက်သည့်အခါ၊ အလင်းရောင်ခြည်သည်မျက်လုံး မှန်ဘီလူးမှကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိထဲကိုဝင်လာပြီး၊မျက်စိ၏နောက်ကျောတွင် အလင်းကိုအထိခိုက်မခံတဲ့ဆဲလ်အမြင် လွှာပေါ်အားအာရုံစိုက်သက်ရောက်စေသည်၊ အဆိုပါအလွှာပေါ်အလင်းအာရုံစိုက်ရန်အတွက်ပုံမှန်မျက်လုံးမှန် ဘီလူးသည်ကြည်လင်ရမည်၊ ကြည်လင်မှုမရှိဘဲဝေေ၀၀ါးဝါးမြင်တွေ့လာသည့်အခါမျက်စိတိမ်စွဲရောဂါဖြစ်သည် ဟုခေါ်သည်။